WARBIXIN: Real Madrid Oo Lasoo Bandhigay Qiimaha Ciyaartooydeeda Muhiimka Ah Ku Shaqeeyaan Halkii Daqiiqo Xilli ciyaareedkaan | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » Premier League » WARBIXIN: Real Madrid Oo Lasoo Bandhigay Qiimaha Ciyaartooydeeda Muhiimka Ah Ku Shaqeeyaan Halkii Daqiiqo Xilli ciyaareedkaan
WARBIXIN: Real Madrid Oo Lasoo Bandhigay Qiimaha Ciyaartooydeeda Muhiimka Ah Ku Shaqeeyaan Halkii Daqiiqo Xilli ciyaareedkaan	Real Madrid ayaa dooneysa in ay soo gabgabeyso xilli ciyaareedkan iyadoo aan laga badin tartamada oo dhan.
Madrid waxaa ugu dambeysay guuldaro kulankii Wolfsburg ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Champions League.
Dabcan Real waa mid ka mid ah kooxaha ugu qanisan adduunka iyadoo Los Blancos ku qarash gareysa mushahar Xadgud ah ciyaartooyda muhiimka ah oo ay lasoo wareegaan kuwaasoo dunida looga yaqaano Galactico.
Nidaamkaan Galactico waxaa kooxda Real Madrid ka hirgeliyay Madaxweyne Florentino Perez oo ilaa hadda masuul ka ah kooxdan ka dhisan caasimada Spain.
Wargeyska Spain kasoo baxa ee, AS ayaa ku xisaabiyay daqiiqad, qaar ka mid ah ciyaartooyda Madrid lacagaha mushaar ahaan ay u qaataan xili ciyaareedkaan.
James Rodriguez oo ah ciyaaryahan inta badan uu iska indho tiro Zidane xilli ciyaareedkan ayaa ah ciyaaryahanka 20aad ee uu isticmaalay macalin Zidane xagaagan.
Laga soo bilaabo xulka ugu horeeyay ee kooxda, kaliya Casemiro iyo Fabio Coentrao ayaa ciyaaray daqiiqado ka yar Rodriguez iyadoo labada ciyaarayah ay dhaawac ahaayeen inta badan xilli ciyaareedkan.
Ciyaaryahanka Colombia ayaa u saxiixay Real Madrid sanadkii 2014 markaasoo lagu soo qaatay lacag lagu sheegay €80 million.
maalgashiga Real ayaa ah € 13.3 million xilli lagu daray mushaarka sanadlaha ah oo gaaraya € 7.759.380.
Sida laga soo xigtay AS natiijooyinka, marka dakhliga la xisaabiyay la helay xilli ciyaareedkan, Rodriguez ayaa daqiiqadii ugu shaqeeya Madrid € 42.354.
Waxa kale oo la xisaabiyay, in Rodriguez waayihii Carlo Ancelotti, uu ciyaaray 1500 oo daqiiqadood oo u dhigantay lacag ahaan daqiiqadii € 14.061.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee hal abuurka leh Isco, oo yimid garoonka Bernabeu 2013 ayaa € 5 million ka qaata Madrid halkii xilli ciyaareed.
Xiddiga Spain ayaa sidoo kale ka mid ah ciyaartoyda mustaqbalka liita kuleh kooxda, laakiin waxa uu saftay in ka badan inta uu ciyaaray ciyaaryahanka reer Colombia.
Isco ayaa ciyaaray 715 daqiiqo xilli ciyaareedkaan, taasoo ka dhigan in daqiiqadii uu ku shaqeynayay mushaar dhan € 15.384.
Waxaa La yaab leh in Cristiano Ronaldo €45 million mushaar ahaa uu u qato sanadkii, taasoo ka dhigan 1211 daqiiqadood oo uu usaftay kooxda inuu daqiiqadiiba ku shaqeysto lacag dhan € 37.159.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/warbixin-real-madrid-oo-lasoo-bandhigay-qiimaha-ciyaartooydeeda-muhiimka-ah-ku-shaqeeyaan-halkii-daqiiqo-xilli-ciyaareedkaan/">WARBIXIN: Real Madrid Oo Lasoo Bandhigay Qiimaha Ciyaartooydeeda Muhiimka Ah Ku Shaqeeyaan Halkii Daqiiqo Xilli ciyaareedkaan</a>